APK "Belorechensky" (SSK "Ovy uralsky") - Gazety "Rafitra Ovy"
Tamin'ny taona 2017, ny Orinasa mpiompiana ovy Uralsky dia natsangana tao amin'ny Faritra Sverdlovsk. Ny mpandray anjara tamin'ny fananganana ny orinasa dia AO AIC "Belorechensky" sy ny Ural Research Institute of Agriculture. Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra any Rosia amin'ny famokarana sy ny famaritana ny aretina ovy masomboly elitika izy io. Ny iray amin'ireo tanjona laharam-pahamehana amin'ny fototra iorenany dia ny fananganana ivon-toeram-pambolena sy fiompiana maoderina ho an'ny famokarana sy fivarotana akora voa ovy avo lenta amin'ny ambaratonga indostrialy, miaraka amina haben'ny varotra 10 taonina ny elite.
Nanomboka ny taona 2018, nahazo ny fanjakana federaly ny tetikasa Ovy Potato. Izy io dia ekena fa manan-danja ara-stratejika hiantohana ny fiantohana ara-tsakafo eto amin'ny firenena ary tafiditra ao amin'ny programa ho an'ny fanjakana hanohanana ny fitomboan'ny ovy Rosiana.
Mikasika ny fitaovana sy ny fitaovana, Ovy Uala no iray amin'ireo ivon-toerana maoderina indrindra ankehitriny. Ny Laboratoara mikropropagation ovy dia afaka mamokatra zavamaniry vitro maherin'ny 100 isan-taona. Teknolojia manokana izy ity rehefa mitombo ny mikroplants avy amin'ny fitaovana sela tsy misy fangarony, nalaina avy amina banky misy karazan'aty mahasalama ao anatin'ny toe-piainana tsy misy fangarony, miaraka amin'ny masontsivana tsara indrindra amin'ny mari-pana, ny jiro ary ny hamandoana. Ny fomba fanatonana tsirairay ny karazany sy ny laboratoara misy antsika amin'ny famaritana aretina ovy amin'ny alàlan'ny fandalinana PCR amin'ny fotoana tena izy dia ahafahantsika mahazo voa manana kalitao avo indrindra.
Ny fitambaran-trano fitobiana, izay misy tranoona miisa 8, dia ahafahana mamokatra mihoatra ny 560000 isan-taona ny mpanao minitra, izay aorian'ny fotoanan'ny torimaso dia ambolena amina tetika manokana hahazoana ny tubers voalohany. Ny dingana tsirairay amin'ny famokarana voa tany am-boalohany sy avo lenta ao amin'ny Ovy Uralsky dia eo ambany fifehezan'ny Rosselkhoztsentr ary miaraka amin'ny famakafakana PCR hijerena ireo otrikaretina miafina sy bakteria miafina.
Hatramin'izao, OOO SSK Uralsky Potato dia tompona karazana mampanantena roa amin'ny fifantina Ural: Terra (tena aloha, amin'ny fampiasana latabatra) sy Alaska (vanim-potoana afovoany, fampiasana latabatra). Manomboka amin'ny 2023, ny tsirairay amin'izy ireo dia hamidy amin'ny volan'ny 1000 taonina amin'ny sokajy elite.
Ireo karazany dia tafiditra ao amin'ny programa FNTP ho an'ny 2017-2025. Araka ny didim-panjakana navoakan'ny federasiona rosiana tamin'ny 15.02.2017 febroary 76 laharana faha-10, ny famokarana ireo sokajin'olom-bary isankarazany dia ampiana amin'ny tetibola federaly. Ny orinasa dia manana karazana tokantrano XNUMX mampanantena sy malaza ao an-toerana, ao anatin'izany ny Ural, ary ny fiompiana vahiny amin'ny làlan-kizorana isan-karazany amin'ny dingana samihafa amin'ny fiompiana. Anisan'ireo karazany novokarin'ny orinasa ny iray, afaka manamarika karazana toy ny Alaska, Terra (fifantenana ny Ivontoerana Fikarohana momba ny fambolena Ural), Gulliver (fifantenana ny Ivotoerana Fikarohana Federalin'ny Ovy antsoina hoe AG Lorkh), Samba (fifantenana ny TatNIISH ), Innovator (fifantenana HZPC Holland BV) sy ny hafa. Miasa am-pahavitrihana ny fikambanana mba hampalaza ny karazany an-trano sy hanitarana ny fahafaha-manaony ara-jeografika.
Ny ekipan'ny orinasa dia misy tena matihanina amin'ny fitomboan'ny zavamaniry sy ny fambolena, ao anatin'izany ny tompony, diplaoma, kandidà amin'ny siansa fambolena. Mpiasa mavitrika rehetra, mazoto, mivoatra ary matihanina hatrany.
Miaraka amin'ny famokarana, Ovy Uralsky, miaraka amin'ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny Ural Agrarian University, dia manao fikarohana mavitrika amin'ny sehatry ny micropropagation, ny aretina aretina ary ny teknolojia agroengineering ho an'ny famokarana ovy. Ny valin'ny fikarohana dia navoaka tao amin'ny diary siantifika.
Nandritra ny telo taona nahombiazan'ny asa mahomby amin'ny fitomboan'ny masomboly, dia azo natao ny nanatratra ny tanjona rehetra voalaza mandritra io vanim-potoana io. Tamin'ny taona 2020, na dia teo aza ny toe-piainana sarotra ara-tontolo iainana sy ny fameperana mifandraika amin'ny areti-mifindra, ny manam-pahaizana manokana dia nitombo mihoatra ny 560000 minitubers, namokatra sy nitahiry voa 200 taonina avy amin'ny sokajy "taranaka voalohany" ary voa 1750 taonina an'ny "super-super -elite "sokajy. Rehefa nahatratra ny fahaizan'ny famolavolana tamin'ny 2021, ny orinasa dia hamokatra voa 10000 XNUMX taonina ovy isan-taona, izay hamaly ny filan'ny Distrikan'i Urals, fa ny faritra hafa ao amin'ny firenena.
Source: mifototra amin'ny fitaovana ao amin'ny diarin'ny Union Potato
Tags: "Ovy ural"APK "Belorechensky"famokarana ovy
Ny Ivotoerana siantifika Uzbek-hongroà dia hirotsaka amin'ny fizahana karazana sy famokarana ovy voa
Ozbekistan dia mikasa ny hisolo tanteraka ny fanafarana ovy amin'ny 2024 amin'ny alàlan'ny fametrahana sy ny fisafidianana ireo karazana ary ny fivoarana hafa ao Ozbekistana vaovao ...
Amin'ny faritra valo any Uzbekistan dia haniry ny ovy
Ny distrika valo ao amin'ny Repoblika Uzbekistan izay mifanila amin'ny halavirana tsirairay avy no hiaina manokana amin'ny fambolena ovy. Ity dia momba ...
Tantaran'ny fahombiazana. Elim-Kyzyl Zhar LLP, Repoblika any Kazakhstan
Potika nitombo eny amin'ny faritra Nizhny Novgorod